Cadastre, ayaa lagu sharaxay qaybta caanka ah - Geofumadas
Cadastre, ayaa lagu sharraxay qaybta caanka ah
Mee, 2012 cadastre, Downloads
Tani waa mid ka mid ah qoraallada ugu dambeeya ee aan shaqeynayo. Waa dukumiinti faahfaahsan oo inkasta oo loo sameeyey shuruudaha, waxay noqon kartaa mid faa'iido u leh waddamada kale ee hawlahaas adag ah ee sharaxaya cadastre ee nuqul ah dadka -badan ama ka yar- Fahmaan.
dukumenti ka kooban yahay bogagga 16 hir shaqeeyay macnaha sawirlaha dhigaya isku darka oo xiiso leh Ilustrator qalin caadiga ah iyo ugu dambayntii Adobe Photoshop si uu u gudbiyo farriin ah in inkasta oo qalloocinaya iyo markooda ayaa la hayo ujeeddo asalka ah. Waa in aan qiro in artist waa weyn yahay, ka fiirsaneysa waxa isbeddel ku lug leedahay shaqo sidan oo waydiinaya oo ka fahmi script ah in uu ahaa kaliya waxa aan ka shaqeeyay in kasta oo aan ku jirey khilaaf qaar ka mid ah in ay yihiin mowjadda by qanacsanaanta of isagoo ugu dambeyntii la daabacay.
Nidaamka caadiga ah wuxuu ka kooban yahay wadahadal u dhexeeya kuwa mas'uulka ka ah guddiga wakiillada kuwaas oo raadinaya duqa iyo bilaabista iyagoo waydiinaya sida canshuurta la ururiyey loo isticmaalay. Badhasaabka ayaa ku faraxsan in la caddeeyo sida canshuurta hantida ay tahay ku-tiirin degmo oo ku kordhinaysa ujeedada dhulka ee madax-bannaanida ma aha oo kaliya go'aannada, laakiin sidoo kale ku-tiirsanaan la'aanta dawladda dhexe. Kadibna wuxuu sharxayaa waxyaallaha gudaha ee degmada iyo sida muwaadiniinta oo dhan ay waajib ugu tahay inay wax ka geystaan ​​kana qeyb qaataan meelaha la-talinta, iyo sidoo kale muhiimada ay tahay in lacagta la bixiyo ay ku soo noqoto shaqada.
Cutubka labaad wuxuu si kooban u sharraxayaa sida uu dhererku u shaqeeyo. In hab document gaaban oo cadastre maaliyadeedka, wuxuu ahaa xunxun oo ku saabsan cabbirka ugu aasaasiga ah iyo diiradda xoogga badan oo ku saabsan qiimaynta magaalooyinka iyo miyiga, iyadoo tusaale u ah sida xisaabinta canshuurta u shaqeeyo. Dabcan, sida uu macnaha guud ee dalka halkaas oo ay ka dhacday ii si ay u horumariyaan layligan halkaas oo sharciga hadda (waa jidka cusub) awood gabagabeeyo qiimaha cadastral la dadweynaha sanadihii dhamaatay eber iyo shan ah.
Qeybta ugu dambeysa waxaan eegnaa qaar ka mid ah dhinacyada waxtarka leh ee cadastre-ka badani ay sidoo kale soo saarto siyaasadaha isticmaalka dhulka iyo amniga sharciga. Waxaa cad in dukumiinti ay leedahay xaalad, waddan iyo mashruuc taas oo mudnaanta codsigu ay tahay maaliyad; hubaal haddii ay ahayd sharci ama dhaqaale-bulsheed amarka labada cutub ee ugu horreeya lahaa ka duwanaan lahaa.
Waayo-aragnimadu waxay ahayd mid xiiso leh, tan iyo markii la sameeyay dukumentiyada kale way fududahay in lagu caddeeyo boggaga iyo boggaga farsamada. Waxaa sidoo kale waa u fududahay in la sababeeyo in tani ay tahay sidaas, siiyey dhaleeceyn kuwa sheegaya in ay u fahmaan, waxaana qabaa geomatics leeyihiin tahay in isticmaalka erayada in uu sare u our ego, wax xun ma ahan sababtoo ah si dhakhso ah ama ka dib waxaad u leedahay inaad meel bannaan u foorarsato :). Laakiin kiiskan, marka ujeedka waa inay la xiriiraan, dhaleeceyn ka akhristaha non-takhasus ah ayaa sheegay in waxa uu sheegaayo, waxaa la fahamsan yahay, ma ay garan, kuwo lagu wareero, oo aad u ballaaran, farsamo uu leeyahay wajiga of damiir lahayn, sinaanta jinsiga, midabka maaliyada, waxay u egtahay sida Danilo Lemuz ... gaaban, barasho oo dhan.
Dukumiintiga halkan ayaan ka dhigayaa, sababtoo ah marka laga reebo nuqullada yar yar ee la daabacay, qalabkani waa in la heli karaa bulshada oo u baahan, iyaga oo qayb ka ah isbeddel aan la leexin karin ee dimuqraadiyada aqoonta. Marar badan waa inaad soo bandhigtaa bandhigyada oo aad ubaahan tahay sawir muuqaal ah ... wixii aan rumaysanahay in daabacaaddani ay macnaheedu tahay kaalin muhiim ah.
Caymisyada waddamada kale waxay kaa heli karaan waxtar dheeraad ah.
Faylka Taariikhda Dhamaan faylka Isticmaalka Metadata Faylka Taariikhda Faylka Faylal xiriiriya
Post Previous«Previous 3 plugins for WordPress oo qiimihiisu yahay maalgashado
Post Next Nidaamka Meeleynta Caalamiga ah sida mashruuc caddaaladeed oo sayniska ahNext »
2 Jawaab ayaa ku socota "Cadastre, oo lagu sharraxay qaybta caanka ah"
Dukumentigu wuxuu leeyahay dhibcaha ku qoran xaashida labaad ee pdf, haddii taasi waa waxa aad ka jeedo.
Maqaalka kor u qaadaya mawduuca, qoraaga Geofumadas.
Yaa ku qoray kor ku xusan?